Vaovao - Fampirantiana Laser Sano
Ny orinasa Sano Laser dia manatrika fampirantiana any Dubai, Espana, Italia, Torkia, Polonina ary Romania isan-taona.
Ity dia sary rehefa manatrika ny Exhibition India. India no tsena lehibe ao amin'ny orinasanay. Manana mpizara be dia be izahay any India. Ary tonga any India in-3-4 isan-taona izahay.
Ao amin'ny fampirantiana any Torkia, ny laser diode, ny hoditra mangatsiaka ary ny milina laser picosecond Nd yag no milina fivarotana tsara indrindra. Ary manana mpizara laser diode sy milina laser picosecond ND yag any Torkia isika izao.
Manana ekipa mpivarotra fiteny Rosiana ao amin'ny orinasako izahay. Izy ireo dia mifantoka amin'ny tsenan'i Okraina, Russia ary Russia. Ary tonga hanatrika fampirantiana Rosiana sy Okraina isan-taona izy ireo.
Ny fampirantiana Hong Kong dia fampirantiana iraisam-pirenena, manatrika an'io fampirantiana io isan-taona izahay, ary manana trano heva lehibe amin'ny fampirantiana Hong Kong.
Any Polonina, ny IPL, ny milina Microneedle RF ary ny milina laser diode dia mivarotra mafana.
Beijing Sano lasers S&T Co., Ltd. Mpanamboatra matihanina momba ny hatsarana sy milina laser any Shina. Sano lasers dia manana ivon-toeram-pikarohana sy fampandrosoana, toeram-pitsaboana, varotra ary departemanta aorian'ny varotra; afaka manolotra ireo angona teknolojia matihanina sy angona momba ny klinika amin'ny voalohany. Afaka mitazona anao hatrany eo amin'ny sehatry ny hatsaran-tarehy foana izahay, noho ny ekipanay matihanina mifangaro amin'ny optika, milina, herinaratra ary fanafody.
Hatramin'ny taona 2005, miasa mafy hatrany i Sano ary manana ny zony mahaleo tena amin'ny zaridaina indostrialy, izay mihoatra ny 100,000.00m2, ary mpiasa mihoatra ny 100. Manangana ny orinasan'ny sampana any Hong Kong koa izahay. Nandray anjara tamin'ny fampirantiana iraisam-pirenena isan-taona izahay. Miaraka amin'ny fiezahana, ny orinasa Sano lasers dia nahazo mari-pankasitrahana fitsaboana an-trano sy iraisam-pirenena ho an'ny fitaovany samihafa, toy ny (TUV) CE, (TUV) ISO 13485, FDA, Certificate; ary koa ny zon'ny fanamarinana fanafarana sy fanondranana, Fahazoan-dàlana ho an'ny Orinasa famokarana fitaovana fitsaboana ary mari-pahaizana momba ny haitao avo lenta.
Miaraka amin'ny filozofian'ny orinasa mifantoka amin'ny mpanjifa sy ny tanjon'ny siansa sy ny teknolojia aloha, miantoka ny vokatra avo lenta sy lafo vidy ho an'ny mpanjifa; izay mahatonga antsika hahazo mpanjifa marobe erak'izao tontolo izao. Sano lasers Company miasa mafy amin'ny fotoana rehetra, dia ny ho lasa OEM iraisam-pirenena / ODM mpanamboatra iraisam-pirenena fitaovana rehetra hatsarana sy fitsaboana eto amin'izao tontolo izao.
Manohana ny teknolojia matihanina:
Manana ny ivon'ny R&D olona 20 izahay, vondrona mpivarotra aorian'ny varotra misy olona 20 ary ny ekipan'ny klinika misy olona 15. Afaka manampy anao amin'ny famolavolana vaovao sy fampivoarana, fampiharana taratasy fanamarinana ary koa hamahana ny olan'ny klinika anao. Azonao atao ny mahita anay mora foana amin'ny alàlan'ny telefaona, webcam ary resaka amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny fampisehoana an-tsary sy sary. Mazava ho azy, afaka manolotra serivisy eo an-toerana isika.
Tongasoa eto Sina!
Tongasoa eto Beijing!
Tongasoa eto amin'ny laser Sano!
Fanesorana volo Shr Opt Ipl, Co2 Laser Laser miato, Shr Ipl Opt, fanesorana ny holatra, Masinina mpanentana hozatra Ems, Laser estetika Co2,